UZuma waziphathisa okwesigelekeqe, kusho uVavi | News24
UZuma waziphathisa okwesigelekeqe, kusho uVavi
Johhanesburg – Ukuvela kwezindaba zokuthi uMengameli Jacob Zuma wahlela itulo nezinhlaka zezobunhloli ukuze kusungulwe inyunyana ezoncintisana ne-Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu) embonini ye-platinum kumele kuthathwe njengesigameko sokugcina esimbi, kusho owayenguNobhala Jikelele weCosatu, uZwelinzima Vavi.
“Uma lokhu kuyiqiniso, sinomengameli ongaphumanga nje kuphela emugqeni, kodwa obelokhu ematasa ezama ukwakha (izinto ezimbi),” kusho uVavi esitatimendeni.
OLUNYE UDABA: OLUKHETHEKILE: UZuma watshela inyunyana ukuba impimpe i-Amcu
UVavi ubephawula mayelana nesimangalo sasenkantolo esibhekene nomengameli Zuma, abanye ongqongqoshe kanye nemiNyango kahulumeni eNkantolo eNkulu yaseNorth Gauteng, ePitoli.
Abaholi bale nyunyana eyasungulelwa ukuqoqa ulwazi ezinyunyaneni eziyizimbangi, ezifana ne-Amcu, bathi bayalelwa wuZuma ukuba bayisungule.
Kulesi simangalo, uThebe Maswabi, ungumunye wabasunguli beWorkers Association Union (WAU),nokuyinyunyana entsha eyasungulwa ngonyaka ka-2014, ufuna ukuhlawulisa uZuma, abanye ongqongqoshe kanye nemiNyango kahulumeni isamba semali engu-R114 million.
UMaswabi ukhala ngokuthi imali ayeyinikwa uZuma kanye nabanye babamangalelwa yavele yanqamuka, nokwashiya uMaswabi ecwile ezikweletini.